कलाकार किरण केसीलाई दर्शक ‘राता मकै’का नामले बढी चिन्छन् । लामो समयदेखि कलाकारितामा सक्रिय उनी हास्य सिरियल ‘जिरे खुर्सानी’बाट लोकप्रिय भए । पछिल्लो समय उनी फिल्म निर्माणमा पनि आबद्ध छन् । उनीसँग युवराज भट्टराईले हास्य संवाद गरेका छन् ।
एक बिहान उठ्दा आफूलाई महिलाका रूपमा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
सबभन्दा पहिले त चकित हुन्छु । अनि, बच्चा भएको कि नभएको महिला भनेर ‘चेक’ गर्छु । यत्तिका वर्ष पुरुषका रूपमा बाँचेको मान्छे, अचानक महिला हुँदा रमाइलो हुन्थ्यो होला । आफ्नो छाती हेरेर आफैँ लजाउँथे होला । आफ्नै बोली, हाउभाउमा छक्क पर्थें होला ।
अदृश्य हुने शक्ति हासिल गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्थ्यो ?
मसँग अदृश्य हुने शक्ति भयो भने देशका भ्रष्टाचारीहरूको ढुकुटीमा पसेर कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरा जानेर सर्वसाधारण माझमा छरपस्ट पारिदिन्थेँ ।
हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ भन्छन् । त्यसो भए कुनै बिरामीलाई हँसाएरै निको पार्न सकिएला त ?
सकिन्छ । हाँस्नु आफैँमा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो । हाँसो भनेको एउटा मनो–थेरापी पनि हो । डिप्रेसन, तनाव भएको मान्छेलाई हँसाइदियो भने उसमा भएको उदासी कम हुन्छ । दिनभरिको तनाव बोकेर साँझ घर फर्किएको मान्छेलाई पनि कसैले हँसाइदिने हो भने उसको तनाव तत्कालै सकिन्छ । ऊ फ्रेस भइहाल्छ । बिरामीलाई पनि हाँसोले ओखतीको काम गर्न सक्छ ?
खासमा हाँस्नका लागि के चाहिन्छ ?
हाँस्नका लागि मान्छे स्वस्थ र मस्त हुनुपर्छ । लेनादेना, तनावलाई त्यागेर हाँस्न सक्ने मान्छे संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे हो ।
वास्तविक जीवनमा तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ ? रमाइलो प्रकृतिको हुनुहुन्छ ?
म बहुतै रमाइलो मान्छे हुँ । ९९.९ प्रतिशत रमाइलो मान्छे ! बाँकीको ०.१ प्रतिशत चाहिँ जीवनका विभिन्न झन्झटले खाइदिन्छन् ।
पर्दामा निर्वाह गरेको भूमिका वास्तविक जीवनमा जिउनुपर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ?
कतिपय पर्दाका कुरा वास्तविक जीवनमा पनि मेल खान्छन् । हामीले पर्दामा देखाउने भनेकै हाम्रो समाजमा भएका, हुन सक्ने घटना हुन् । पर्दाको जस्तै पात्र भएर बाँच्नुपर्‍यो भने पनि बाँचिन्छ ।
अरूलाई हँसाउन खप्पिस मान्छे तपाईंलाई हँसाउन भने कत्तिको सजिलो छ ?
म ज्यादै सजिलो मान्छे हुँ । मलाई श्रीमतीले हँसाउँछिन् । हरिवंश आचार्य, मनदकृष्ण श्रेष्ठ, शिवहरि पौड्याल, सुरेन्द्र केसी ‘मुला साग’ले पनि हँसाउनुहुन्छ । देशका नेताले पनि मलाई हँसाउँछन् । तिनको व्यहोरा, काम गराइले कम्ता हँसाउँदैनन् ।
प्लास्टिक सर्जरी गरेर शरीरको कुनै अंग बढाउनुपर्‍यो भने कुन अंग बढाउनुहुन्छ ?
म त घटाउन चाहन्छु । आफ्नो नाक अलि ठूलो भएको जस्तो लाग्छ । नाकलाई अलि सानो बनाउने थिएँ ।
जनावरको रूप लिनुपर्‍यो भने कुन जनावर बन्नुहुन्छ ?
जनावर नै बन्नुपर्‍यो भने बिरालो किन बन्नु ? बनेपछि सिंह नै बन्छु । आखिर जंगलको राजा हो, सिंह ।
तपाईंलाई बढी हाँसो उठेको आफ्नो बारेको मजाक कुन हो ?
सामाजिक सञ्जालमा मेरा टेलिफिल्महरूको क्यारेक्टरलाई लिएर मजाक बनाइरहेका हुन्छन् । मैले गरेका कामहरूको जोक्स बनाइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय मलाई बढी मज्जा लागेको आफ्नै जोक ‘को बन्छ करोडपति’को हो । कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा अन्तर्वार्ताको प्रसंग सम्झेर अहिले पनि हाँस्छु । एक जना पत्रकार भाइले मलाई इन्टरभ्यूका लागि बोलाउनुभयो । त्यहाँ गएर मेकअप गरेँ । स्टुडियोमा गएर बसेपछि अन्तर्वार्ता सुरु भयो । केही मिनेटपछि अर्का एक जना भाइ आएर ‘मैले बोलाएको मान्छेलाई किन तिमीले अन्तर्वार्ता लिएको’ भनेर विवाद गर्न थाले । दुवै जनाको विवाद हेर्दाहेर्दै बीचमा रहेको म पंगु भएँ । पछि थाहा भयो, उनीहरूले मिलेमतोमा त्यस्तो गरेका रहेछन् ।
आफू दुःखी र उदास क्षणमा हुँदा पनि हँसाउनुपरेका कुनै घटना छन् कि ?
यस्ता घटना धेरै पटक भएका छन् । बुबा बितेको समयमा म त्यति धेरै चर्चित भइसकेको थिइनँ । ‘१५ गते’ टेलिसिरियलमा काम गर्थें । बुबा बितेको बेला पशुपतिमा मलाई देखेर धेरै मानिस हाँसेका थिए । उनीहरू हाँसेको कारण म रुन पाएको थिइनँ । पछि एक्लै दक्षिणकाली मन्दिर गएर बुबालाई सम्झिएर धुरुधुरु रोएको छु ।
अर्काे घटना पनि छ । आमालाई बी एन्ड बी अस्पतालमा आईसीयूमा राखिएको थियो । आमालाई पाइपबाट झोल खानेकुरा खुवाइरहेको थिएँ । एक जना महिला आफ्नो बच्चा लिएर आइन् र मलाई ‘एक पटक मेरो बाबुलाई राता मकै भन्दिनुपर्‍यो’ भन्दै जिद्दी गरेकी थिइन् । आँखाभरि आँशु लिएरै पनि मैले ‘राता मकै’ भनेको थिएँ । चार वर्षअघि दाजु बितेको समयमा गोरखामा एउटा कार्यक्रममा थिएँ । श्रीमतीले खबर गरिसकेपछि रुन मन हुँदाहुँदै पनि स्टेजमा गएर दर्शकलाई हँसाएको छु ।
अहिले हास्यव्यंग्यका नाममा कलाकारले भद्दा र छाडा प्रस्तुति दिएको भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?
अहिले हास्यव्यंग्यमा केही मात्रामा छाडापन आएको सत्य हो । दोहोरो अर्थ लाग्ने र भद्दा प्रस्तुतिमा दर्शक बढी हाँसिदिन्छन् । केही कलाकारले यस्तै कुरालाई अधिक प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, यसमा मेरो आपत्ति छ । अहिलेका हास्य कलाकार, स्टयान्ड अप कमेडियनले यस्ता कुरालाई बढी प्रयोग गरेका छन् । हास्यव्यंग्य नांगो हुँदै गएको छ । कलाकारले ठीक शैली र प्रस्तुति समाउनुपर्छ । समाजमा आफ्नो प्रस्तुतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।